वर्षमा केवल ५ घण्टा खुल्ने विश्वकै अनौठो मन्दिर ! जहाँ महिलाको लागि यस्तो छ नियम ! – MediaNP
काठमाडौँ । भारतको छत्तिसगढ प्रान्तको गरियाबन्द जिल्लामा रहेको निरई माता मन्दिर वर्षमा ५ घण्टा मात्रै खुल्छ । वर्षमा एक दिन त्यही पनि ५ घण्टाको लागि खुल्ने अनौठो मन्दिरमा महिलाको लागि भने विशेष किसिमको नियम रहेको छ ।
पहाडी इलाकामा पर्ने देवी मन्दिरमा अन्य देवीको मन्दिरमा सिन्दुर, श्रृंगारको सामान तथा फलफुलको साटो केवल नरिवल र अगरबत्ति मात्रै चढाउने परम्परा रहेको छ । चैते दशैको नवमीको दिन बिहान ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म मन्दिर खुल्ला गरिन्छ ।उक्त दिन बाहेक अन्य दिन मन्दिर जान प्रतिबन्ध लगाएइको छ । चैत्र नवरात्रीमा आफै ज्योति प्रज्वलित हुने दाबी गरिएको छ ।
तेल बिना नै आफै ज्योति दिनुलाई स्थानीहरुले चमत्कारको रुपमा लिएका छन् । महिलाको लागि निषेध गरिएको मन्दिरमा पुरुषहरु मात्र जान पाउँछन् । त्यतिमात्र हैन् त्यो मन्दिरको प्रसाद पनि महिलाले खा पाउँदैनन् । यदि महिलाले मन्दिरको प्रसाद खाएमा विभिन्न किसिमको नकारात्मक असर देखिने जनविश्वास रहेको छ ।